ထိုင်းမြောက်ပိုင်း သစ်တောအတွင်း ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဆောက်လုပ်မှု ချင်းမိုင်မြို့ခံများ ဆန္ဒပြ - Yangon Media Group
ချင်းမိုင်၊ ဇပြီ ၃ဝ
ထိုင်းနိုင်ငံဒွိုင်ဆူသက်တောင် ခြေသစ်တောကြိုးဝိုင်းအတွင်း၌ တရားရေးဌာန ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများဆောက်လုပ်မည့် စီမံကိန်းအား ချင်းမိုင်မြို့သူမြို့သား ၅ဝဝဝ ခန့်တို့က ဧပြီ ၂၉ရက်တွင် စုရုံးကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်ဟု ဧပြီ ၃ဝရက်သတင်းများအရ သိရသည်။
ယင်းသည် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း ထိုင်းစစ်တပ်မှအာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးနောက် အင်အားအကြီး မားဆုံးသော ဆန္ဒပြပွဲတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဝန်ကြီးချုပ် ပရာယွတ်ချန် အိုချာအနေဖြင့် သစ်တောကြိုးဝိုင်းအတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် ယင်းစီမံကိန်းအား တစ်ပတ်အတွင်း အမိန့်ထုတ်ဖျက်သိမ်းပေးရန် ဆန္ဒပြသူများက တောင်းဆို ခဲ့ကြသည်။ မိမိတို့ဆန္ဒပြမှုသည် နိုင်ငံရေးနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ဆန္ဒပြသူလူစုသည် နံနက် စောစောပင် Tha Phae Gate ၌ စုရုံးရောက်ရှိလာကြရာ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်အင်အား ၃ဝဝ ခန့်က ယာဉ် ကြောများမပိတ်ဆို့ရန် ရှင်းလင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြသည်။
ဒွိုင်ဆူသက်တောင်တန်းသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၇၇၂ နှစ်လန်နာရှေးဟောင်းပဒေသရာဇ် ခေတ်ကပင် ဗုဒ္ဓဌာပနာတော်များ မြှုပ်နှံထားပြီး ချင်းမိုင်မြို့၏ ဘာသာ ရေးအထွတ်အမြတ်ထားရာတောင် ဖြစ်သည်ဟု ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင် ဖြစ်သူ တီရာဆတ်ရူးဆူဝမ်က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။ ယင်းဒေသသို့ ဘုရားဖူးများသည် Ratchadamnoen လမ်းမကြီးမှတစ်ဆင့်သွားရောက်နိုင်ကြ ပြီး ဒရုန်းလေယာဉ်ဖြင့် ရိုက်ကူးထားသောပုံများအရ ယင်းတောင်၌ လန်နာမင်းများခေတ်ဧကရာဇ်သုံးပါး၏ အထိမ်းအမှတ်ရုပ်တုများအား တွေ့မြင်ရသည်။ ဆန္ဒပြသူများသည် အေးချမ်းစွာဖြင့်ပင် လူစုခွဲသွားခဲ့ကြသည်။
တောင်ငူမြို့နယ် ပန်းပဲတိုးချဲ့ကြိုးဝိုင်းနှင့် ခပေါင်းကြိုးဝိုင်းအတွင်းမှ တရားမဝင်သစ်မျ
ခြေစွမ်းမြင့်မားသော ရတနာပုံအသင်းနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် အာရုံစိုက်မှု လိုအပ်ကြောင်း ရှမ်းနည်း?
ချန်ပီယံရှစ် Play-Off ဗိုလ်လုပွဲသို့ တက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမှာ မိမိဘဝ၏ အပျော်ဆုံးကာလဟု ဒါဘီနည်းပြ လမ?
ရေးမြို့တွင် ပင်လယ် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် သေမှုသေခင်းနှင့် လူသတ်မှု ၄၃ ခုဖြစ်ပွား?